Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Columbian Duvan Zapata hoodmụaka Akụkọ Ihe Mere Eme Ihe Utold Biography Eziokwu
Akụkọ ndụ anyị nke Duvan Zapata na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Nwunye, Childrenmụaka, Ndụ, Ezigbo ndụ na Ndụ Onwe Onye.
Na nkenke, nke a bụ akụkọ banyere njem ndị na-agba ọsọ ụkwụ Duván Esteban Zapata, site na nwata, rue mgbe ọ mechara nwee ihe ịga nke ọma.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ onwe gị sie ike, nke a bụ oge ọ bụ nwata rue ụlọ okenye - nchịkọta zuru oke nke Duvan Zapata's Bio.
Alfredo Morelos Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Ndụ na ịrị elu nke Duvan Zapata.
Ee, onye ọ bụla maara Zapata maka ọsọ ya, anụ ahụ ya na nnukwu anya ya maka ịme ihe mgbaru ọsọ.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle ụdị nke Duvan Zapata's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ nwata Duvan Zapata- Mmalite Ndụ na Ezin’ụlọ:
N'ihi na Biography EBIDO, ọ na-eburu aha otutu “Nnukwu Etu". Duván Esteban Zapata Banguero a mụrụ na 1st ụbọchị nke Eprel 1991 na ụlọ ọgwụ Rafael Uribe Uribe na Cali, Colombia.
Ndị bọọlụ Colombia bụ nwa nke abụọ n'ime ụmụ abụọ nne ya mụrụ, Late Elfa Cely Banguero na nna ya, bụ Luis Oliver Zapata. N'okpuru ebe a bụ foto a na - adịghị ahụkebe nke nne na nna mara mma Duvan Zapata.
Zute ndị nne na nna Duvan Zapata - nne ya, Late Elfa Cely Banguero na nna ya, Luis Oliver Zapata.
Ezigbo Ezinụlọ Duvan Zapata: You maara na onye na-eme anwansi na-agba afa bụ mba Columbian nke agbụrụ agbụrụ na agbụrụ ezinụlọ Afro-America?
N'ezie, ndị nne na nna Duvan Zapata zụlitere ya na agbata obi Córdoba nke mpaghara Aguablanca, na Cali ebe ya na nwanne ya nwanyị tọrọ ya bụ Cindy Carolina tolitere.
A mara mma Duvan Zapata Childhood Photo- A zụlitere ya na Cordoba na Cali.
Ndụ nwata nke Duvan Zapata: N'ịbụ onye tolitere na Córdoba, nwa okorobịa Duvan malitere ịgba bọl n'okporo ámá dị warara nke Cali ebe ụlọ ya dị.
Mgbe nwatakiri ahụ nọ na ya, ọ rọrọ ịbụ onye ọkpụkpọ ama ama ama ama, ọ bụghị maka ama ama ma ọ bụ akụ dị ịtụnanya kama inwe ike ị nweta PlayStation!
Duvan Zapata Mmụta na Ọrụ Buildup:
Ka ọ dị mgbe Duván dị afọ iri na otu, ikike ịgba bọla ya adịlarị anya nke nne na nna ya bụ ndị lere anya na ọ dabara na ụlọ akwụkwọ ọhụụ na Liceo Superior del Valle na Ciudad Córdoba kwesịrị ibido aka na ịkụ aka ọrụ na bọl.
Na 11, Duvan enweworị ahụ egwuregwu ma dị njikere ịmalite ịmalite ọrụ na football.
Ya mere, Duván nke 6th mgbe ọ chọchara nkwenye nke ndị mụrụ ya ka o debanye aha na ọkwa nwata nke América de Cali na 2002.
Mgbe Duvan nọ na klọb mpaghara ahụ, Duvan toro n'ike, nka na ịdị elu nke na ọ guzolarịgogo na 1.86m mgbe ọ bụ agadi 16 n'afọ 2007.
Ndụ Duvan Zapata Early Career:
Ọ bụ na América de Cali ka Duvan gbagoro n'ọkwá ahụ, tụgharịa ọkachamara na ọbụnakwa merie na mbụ ya ka onye isi ya nwee obi ụtọ - Diego Umaña - onye nyeburu ya ohere ka ya na ndị otu klọb nwee ọzụzụ.
Duván na-egwuri egwu maka América de Cali maka oge abụọ ọzọ (2009/2010 & 2010/2011) tupu e nyefee ya n'akụkụ ndị Argentina - Estudiantes ebe o meriri na mbido ya.
Can nwere ike ịhụ ya na otu egwuregwu klọb América de Cali?
Egwuregwu nke football gara n'ihu na-edekọ nnukwu mmụba na ihe mgbaru ọsọ n'agbanyeghị na oge ụfọdụ na-eme ka ndị otu klọb chebe.
Dị ka ndị dị otú a, Estudiantes zụrụ ọkara nke ikike ya site na América de Cali obere oge tupu ọ malite ịmasị mmasị site na klọb ndị dị elu nke Europe gụnyere West Ham nke dị nso ịbanye ya mana ọ hapụrụ n'ihi na ha enweghị ike ịnweta ikike ọrụ maka ya.
Radamel Falcao Child Story Plus Na-emeghị Ihe Nkọwa Eziokwu
Ọụ nke ezinụlọ Duvan Zapata amaghi oke n'oge ụlọ ọgbakọ ndị Italia, Napoli nyeere ya aka ị nweta akwụkwọ ikike Italiantali ka ọ kpọọ maka ha.
Ihe omuma Duvan Zapata - Tozọ Gara Akụkọ nke:
Duvan onye Italian Side Napoli mechara zụta, enwetaghị ezigbo ohere iji gosipụta onwe ya n'agbanyeghị na ọ bụ otu n'ime ihe kachasị ọnụ ahịa klọb n'oge ahụ.
Carlos Bacca Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
N'ezie, onye nchịkwa Napoli n'oge ahụ Rafa Benitez na-ekwukarị na Duvan dị mkpa na klọb mana enweghị oge onye na-eti ihe gosipụtara ihe megidere.
Napoli bụ ebe mbụ ọ nwere nkụda mmụọ na-egwu bọl ụgbọ elu.
N'ihi ya, ọ bụghị ihe ijuanya na Naples gbaziri Duvan na Udinese ebe ọ tara ahụhụ na-adịghị agbanwe agbanwe n'ihi mmerụ ahụ. Onweghikwa ezigbo Duvan na Sampdoria ebe ọ ka nọ na-emezu ikike ya.
N'ezie, Duvan natara oku maka ndị mbido nke Colombia maka iko World Cup nke 2018 mana emeghị ka ọ belata na ndepụta ikpeazụ maka ebumnuche doro anya.
Ihe omuma Duvan Zapata - Bilie na Akụkọ Ama:
Dị ka Phoenix nke si na ntụ ya daa, Duvan malitere igosipụta ike ya zuru oke na Atlanta, klọb nke Sampdoria resịrị ya mgbe ndị Italiantali kpebiri na ọ dịghịzi ya mkpa.
N'ihe banyere ihe mgbaru ọsọ mgbe ọ gbasasịrị mgbaru ọsọ, Duvan guzobere onwe ya dị ka onye kachasị asọpụrụ asọmpi Serie A na Cristiano Ronaldo na ya mpụta oge oge!
Ọbụna o nyeere Atalanta aka iru 2019 Coppa Italia Final wee nweta ebe nke atọ na Serie A. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Hụ onye keere ihe onyinye na Christiano Ronaldo
Nwunye Duvan Zapata na Kidsmụaka:
N'ịga n'ihu na ndụ ezinụlọ Duvan Zapata, ọ lụrụ nwunye ya nwanyị lụrụ nwunye - Nana Montaño ma nwee ọtụtụ ihe ọma na-aga n'ihu na ndụ alụmdi na nwunye ya.
Di na nwunye zutere na 2012 na Cali mgbe Duvan na-egwu Estudiantes nke Argentina. Nana bụ nwa akwụkwọ mahadum na-amụ banyere akparamaagwa n'oge ahụ.
Ha dated maka afọ ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị wee were mmekọrịta ha na ọkwa ọzọ site n'ịlụ di na nwunye mgbe afọ ole na ole gasịrị.
Zute Nwunye Duvan Zapata. Ha na-ele anya zuru oke maka ibe ha, ọ bụghị ya?
Nana bụ nwanyị maara nke ọma otu esi echekwa nwoke ya! Dika odi, odighi ihe ndekọ nke Duvan inwe ndi enyi nwanyi ndi ozo n'oge ya na nwanyi ghuru nwunye ya.
Di na nwunye bu nne na nna umuaka mara nma n'oge edere akwukwo a. Ha gụnyere Dantzel (nwa nwanyị) na Dayton (nwa nwoke).
Foto nke Duvan Zapata ya na nwunye ya na ụmụ ya Dantzel & Dayton.
Ndụ Duvan Zapata Ezinụlọ:
Onye bụ Duvan Zapata na-enweghị ezinụlọ na gịnị ka ọ gaara abụ ma ọ bụrụ na nne na nna ya na nwanne ya anọghị ya na mbido? Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara ndị ezinụlọ Duvan Zapata malite na nne na nna ya.
Banyere nna Duvan Zapata: Luis Oliver Zapata bụ nna nke ọgụgụ isi nke football. A mụrụ ya na Kọrịnt, Columbia, tolite na Tetillo.
Ee, Zapata bụ nna na-ahụ n'anya ma na-akwado ya, ọ zụlitere Duvan ka ọ bụrụ nwa na-erube isi ma na-asọpụrụ ma hụ na ọ gụrụ agụmakwụkwọ ka na-agba bọl.
Kedu ihe ọzọ? Enweghi mgbe Luis nwara iwere Duvan zụọ n'oge ọrụ ya. Ugbu a, Luis na-ekere òkè dị ukwuu n'ịrụ nwa nwoke ọ mụrụ naanị mkpa ọ dị ilekwasị anya ma dị umeala n'obi.
Foto a na - adịghị ahụkebe nke Luis na-ekpori ndụ ezumike dị oke ọnụ site n'ikike nwa ya rụzuru.
Banyere nne Duvan Zapata: Late Elfa Cely Banguero Duvan Zapata nne ya. A mụrụ ya na Padilla, Columbia wee zụlite na Tetillo ebe ọ zutere nna Duvan. Dị ka di ya bụ Luis, Elfa nyere aka maka ịrị elu nwa nwoke ọ mụrụ.
N'ezie, a na-akwụ ya ụgwọ maka ịkpọrọ Duvan dị afọ 11 maka ịkwalite n'ime ọkwa nwata nke América de Cali.
Ọ dị nwute na ọ dịtụbeghị ogologo ndụ iji rite mkpụrụ nke ọrụ ya ka ọ dara ma nwụọ na June 2010.
Ọ bụ ezie na Duvan nwere mmetụta dị ukwuu na ọnwụ ya, ọ gbakọtara na obere oge ma mee mkpebi ịsọpụrụ ncheta nke nne ya site n'itinye uche na football.
Zute Mama Duvan Zapata: Ọ dị ka nke ọzọ: Ncheta Elfa Cely Banguero ga-enwe obi ụtọ ruo mgbe ebighị ebi n'obi nwa ya nwoke bụ Duvan.
Banyere ụmụnne Duvan Zapata: You maara na Duvan enweghị nwanne nwoke ma nwanne nwanyị bụ nwanne ya nke okenye.
Nwanyị a akpọrọ Cindy Carolina tolitere na Duvan ma nọrọ ya nso kemgbe ọ bụ nwata ruo taa.
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịmara na ha abụọ nwere otu mmụọ maka bọọlụ ma mee ka usoro nkwukọrịta meghee n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ha dị ọtụtụ kilomita.
Zute Nwanna Nwanyị Duvan Zapata- Cindy Carolina. Ha abụọ tolitere ma ka na-enwe mmekọrịta chiri anya.
Banyere ndị ikwu Duvan Zapata: Ewezuga ndụ nke Duvan Zapata, amachaghị banyere nna nna ya na mgbọrọgwụ ezinụlọ ya dịka o metụtara nne na nna ya na nne na nna ya.
N'ihi otu n'ime nne na nna Duvan Zapata, o metụtara nwanne ya bụ Cristian Zapata onye bụ nwanne nwanne ya.
Cristian na-egwuri egwu na Genoa na Serie A, amabeghị ihe banyere ndị nne na nna ya na nwanne nne ya na nna nna ya, ụmụ nwanne ya na nwanne nne ya amabeghị ya n'oge edere akụkọ ndụ a.
Zute nwa nwanne nna Duvan a ma ama bụ Cristian Zapata.
Duvan Zapata Biography - Ndụ Nke Onwe:
A na - agbakwunye ọnọdụ Duvan Zapata dị ka onye na - eme ihe ọfụma - na ọbụnadị mere ka ọ dị mma - site na nnukwu mmadụ nke akọwapụtara site na akara nke akara Aries Zodiac.
Ọ dị obi umeala, dị ike, na-atọ ọchị, na-agbasi mbọ ike, na-achọsi ike ma na-emeghe ikpughe eziokwu banyere nke onwe ya na nke onwe ya.
Mgbe ọ bụla onye na-eti ihe anaghị azụ ọzụzụ ma ọ bụ na-egwu bọl, ọ na-eme ihe ole na ole a na-elekarị oge anya dị ka ọdịmma na ntụrụndụ ya.
Ha gụnyere ime njem, igwu mmiri, igwu egwuregwu vidio na iso ezi na ụlọ ya nọrịa.
Nnyocha dị omimi nke nnukwu spidomita na-atụ aro Duvan njem na Mini Cooper. Ka a sịkwa ihe mere nwata ahụ ji chọọ selfie.
Duvan Zapata Web:
Banyere otu Duvan Zapata si eme ya ma na-emefu ego ya, o nwere ego ruru $ 1M n'oge edere.
Otutu akụ na ụba nke ndị na-eti ihe nwere isi mmalite ndị akwụ ụgwọ na ụgwọ ọrụ ọ na-enweta maka ịgba bọọlụ elu-elu ebe nkwenye na-enye aka na nnukwu akụ na ụba ya.
Dị ka nke a, onye na-eti ihe na-enye ibi ndụ okomoko nke ndị Fans na ndị iro na-emere ya anyaụfụ. Ihe akaebe nke ezi ndu nke Duvan gunyere ikike nke igbanwe ugbo ala ndi choro tinyere ulo na ulo ndi ozo.
Eziokwu Duvan Zapata:
Iji chịkọta akụkọ nwata anyị Duvan Zapata na akụkọ ndụ anyị ebe a bụ ihe amabeghị banyere ma ọ bụ akụkọ a ma ama banyere onye ọkpọ ahụ.
Eziokwu nke mbụ: Nkwụsị ụgwọ ụgwọ ọnwa: Dị ka n'oge ederede, nkwekọrịta onye agha ahụ na Atlanta BC na-ahụ ya ka ọ na-akwụ ụgwọ buru ibu nke € 4,680,000 kwa afọ. Gwọ ọnwa Duvan Zapata n'ime ọnụọgụ miri emi, anyị nwere ihe ndị a;
EGO SITERE N’ỌRỌ
SALARY NA EURO
SALARY INUPU EGO
D YE KA Ọ B. $ 5,122,377 € 4,680,000 £ 3,970,867
MGBE MARA $ 394,029 € 360,000 £ 305,405
IZU EGO $ 98,490 € 90,000 £ 76,351
EGO $ 14,069 € 12,857 £ 10,908
N’ỌROUR $ 586 € 536 £ 455
MGBE NIILE $ 9.76 € 8.9 £ 7.58
MARA N’ỌBCOR. $ 0.16 € 0.15 £ 0.13
Kemgbe ị malitere ilele Duvan Zapata'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ị maara?… Ọ ga-ewe onye ọrụ gbagote na Europe ma ọ dịkarịa ala afọ 18.5 iji nweta otu ihe ahụ Nnukwu Etu na-akpata na 1 ọnwa.
Eziokwu nke abụọ: Okpukpe: Dị ka akụkọ si kwuo, ọ ga-abụ na nne na nna Davan Zapata zụlitere ya ịgbaso okwukwe okpukpe Katọlik.
Gị onwe gị, onye na-eti ihe, ọ bụghị nnukwu okpukpe ma ahụrụ ya n'otu ụka Katọlik (lee anya n'okpuru). Ihe mmepe a mere ka o kwe omume na Duvan bu onye Kristian na onye Katoliki.
Okpukpe Duvan Zapata- Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ na ọ bụ onye kwere ekwe.
Eziokwu nke 3: Duvan Zapata Tattoo Tattoo Eziokwu: Dị ka Donyell Malen, Samuel Chukwueze, Luis Muriel na Krzysztof Piatek, Duvan Zapata enweghi aru aru n'oge a na-ede, ndi Fans enweghi akara aka ya.
Ọ na-elekwasị anya na imeziwanye ahụ ya, ume na ikekwe ịdị elu maka ikuku na-arụ ọrụ nke ọma.
Foto gosipụtara na ya enweghị akara ọ bụla n'oge ederede.
Eziokwu # 4: Duvan Zapata FIFA FIFA: You maara na Duvan Zapata nwere ọkwa FIFA niile nke 83 n'oge ederede.
Agbanyeghị na ọkwa ya enwegogo mmụta mbara igwe n'oge na-adịbeghị anya, ọ nweghị ịgọnahụ eziokwu ahụ na ọkwa nke 87 ga-adọrọ mmasị na ndị ọrụ FIFA na-achọ nhụjuanya zuru oke nke nkà.
Ntụle ya na-ebili ma na-ebili ngwa ngwa.
Eziokwu nke ise: Anụ ụlọ Duvan Zapata: Enwere ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu nwere ihe maka anu ulo ha kacha bụrụ nkịta na Duvan Zapata bụ otu n'ime ha! N’ezie, nkịta ya dị ka mgbakwunye na ezi na ụlọ ya dịka a na-ahụ ya n’ụzọ ọ na-egosipụta ya na foto ezinụlọ.
You hụrụ anụ ụlọ n'anya dịka Duvan Zapata na ezinụlọ ya?
Eziokwu nke 6: Duvan Zapata okingokingụ Sịga na Mmanya Nri: Enweghi Duvan Zapata ị drinksụ ihe ọ hardụ hardụ siri ike, ahụbeghịkwa ya ka ọ na-a smokingụ sịga n'oge edere.
Site n'inwe ezi ahụike dị otú a, Duvan na-esonye na ndị egwuregwu bọọlụ na-echefughị ​​mkpa ọ dị ibi na ahụike.
Ihe omuma Duvan Zapata - Ihe Ọmụma Ihe Wiki:
N'akụkụ ikpeazụ a nke Duvan Zapata Biography Eziokwu, ị ga-ahụ ebe ihe ọmụma Wiki anyị. Ihe ngosi n'okpuru, ọ na - enyere gị aka ịchọta ozi gbasara onye egwu ahụ n'ụzọ dị nkenke ma dị mfe.
Enwe aha Duvan Zapata Duván Esteban Zapata Banguero
Ubochi omumu Duvan Zapata 1st nke Eprel 1991
Afọ Duvan Zapata 28 (Ka nke February 2020)
Aha nna nna Duvan Zapata Luis Oliver Zapata
Aha nne nne Duvan Zapata Elfa Cely Banguero (Mbubreyo)
Ogo Duvan Zapata 1.89 m (6 ft 2 na)
Ebe amụrụ Duvan Zapata Padilla, Cauca, Colombia
Nwanne Duvan Zapata Cindy Carolina
Cousin Duvan Zapata Cristian Zapata
Okpukpe Duvan Zapata Iso Christianityzọ Kraịst (Katholism)
Nwunye Duvan Zapata Nana Montano
Mụ Duvan Zapata Dantzel (nwa ya nwanyị) na Dayton (nwa ya nwoke).
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ nwata anyị Duvan Zapata Plus Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
Akwụkwọ akụkọ Atalanta BC
Bọchị gbanwee: Mee 9, 2021
Bọchị gbanwee: Mee 25, 2021
Bọchị agbanweela: June 10, 2021